FSX & P3D ရှုခင်း - Rikoooo
1 ၏41 ​​ရလဒ်များ 15 - 52 ၏ XNUMX
VFR Balice ပိုလန် FSX & P3D
Lotar Tomczyk နှင့် Jakub Mista မှဖန်တီးခဲ့သော "VFR Balice Extension I" (ဗားရှင်း ၁.၂) ၏လှပသောရှုခင်းကိုတွေ့ရပြီးKraków (EPKK) မြို့နှင့်ပိုလန်ရှိ Balice ကျေးရွာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အသေးစိတ် 1.2D အရာဝတ္ထုများနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများအပြင်တိုးတက်လာသောညဘက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူ။ realis နှင့်အတူအပြီးအစီး pack ကို ... ဆက်ဖတ်ရန်
အရွယ် 96.5 ကို MB
downloads ရယူရန္2969
ဤတွင်အတွက် HD ကိုဓာတ်ပုံလက်တွေ့ကျကျမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Prepar3D v4.5 နှင့် FSX / SE ဆီးရီးယား၏ခမ်းနားကမ်းရိုးတန်းမျိုးပွားပေးသော။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမျှဝေခံစားသူများအတွက်ဤရှုခင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးတင်ပြခွင့်ရခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေနပ်အားရပြီး၎င်းကိုဖန်တီးသူ Maher Souriti (PRO Simulation) ကိုယုံကြည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
PRO ခြင်း simulation - ရေးသားသူနှင့်ဒီဇိုင်နာ: MAHER SOURITI
downloads ရယူရန္5881
Edwards လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း KEDW Photoreal FSX & P3D HOT
ယူအက်စ်ရှိ Edwards AFB လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း (KEDW) သည်လေတပ်ပျံသန်းမှုစမ်းသပ်မှုစင်တာနှင့် NASA ၏ Dryden ပျံသန်းမှုသုတေသနစင်တာ၏နေအိမ်ဖြစ်သည်။ 1950 များမှ စ၍ အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်အားလုံးနီးပါးသည်အက်ဒွပ်စ်တွင်စမ်းသပ်ပြီးလေကြောင်းနယ်ပယ်တွင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အို ... ဆက်ဖတ်ရန်
BlueSkyScenery မှရှုခင်း။ Guy Diotte မှဖြည့်စွက်ချက်များ။ Rikoooo အားဖြင့်ပြင်ဆင်ချက်
အရွယ် 3.37 GB ကို
downloads ရယူရန္ 11 849
စိန့်ဘာသယ်လဲမီအခမဲ့အဘို့ P3Dv4 HOT
အဘို့အတင့်တယ်ရှုခင်း Prepar3D v4 - စိန့်ဘာသယ်လဲမီ။ ဓာတ်ပုံ resolution ကို: 50 စင်တီမီတာ pixel ။ အပြုသဘောတန်ဖိုးများများအတွက်5မီတာ: resolution ကို mesh ။ OSM ဒေတာနှင့် Scenproc နှင့်အတူ Autogen ။ ပက်ထရစ်ဒူဘွာအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အလိုအလျောက် installation.Start စိန့်ဂျင်းလေယာဉ်ကွင်း (TFFJ) .Saint-ဘာသယ်လဲမီ, တစ်ဦးပြင်သစ်စကားပြောကာရစ်ဘီယံမှသင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ Prepar3D v5 & v4
အရွယ် 288 ကို MB
downloads ရယူရန္ 26 968
အဆိုပါ Guadeloupe အခမဲ့အဘို့ P3Dv4 HOT
ဤတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Guadeloupe တစ်ဦးပြည့်စုံအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရှုခင်းများအတွက်ပါ! အဘို့ဤလှပသောရှုခင်း Prepar3D v4 အနေနဲ့ Auto-gen (သစ်တောများနှင့်အိမ်များဒေသများ) နှင့်တစ်ဦး 1m resolution ကိုကွက်အဖြစ်အချို့သော 3D တ္ထုများကလိုက်ပါသွားသည်။ သငျသညျဝင်ရိုးစွန်းCaraïbesလေဆိပ် TFFR (ယခင် point-à-တွင်းကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်စတင်နိုင်ပါသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
အရွယ် 9.80 GB ကို
downloads ရယူရန္ 102 635
လက်ပံ KPDX Photoreal FSX & P3D HOT
လက်ပံရဲ့ကြီးမြတ် Photo-လက်တွေ့ကျကျရှုခင်း (ICAO Code ကို: KPDX) နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်, ရှုခင်း pixel နှုန်း 32,625m ၏မြင့်မားသော resolution နဲ့ 1 စတုရန်းကီလိုမီတာတစ်ဦးစုစုပေါင်းဖုံးလွှမ်း။ မှန်ကန်သောလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏ align နှင့်လေဆိပ်များတွင်အတူရှုခင်း FSX နှင့် Prepar3D။ VFR ပျံသန်းမှုများနှင့် approach.At အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရှုခင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
downloads ရယူရန္ 14 971
Salt Lake City, Photoreal FSX & P3D HOT
Salt Lake City, (KSLC), အ Utah ၏ပြည်နယ်နှင့် Salt Lake ၏ခရိုင်ထိုင်ခုံ၏မြို့တော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမြို့တမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကြီးမားသောဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်ရှုခင်းမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွယင်း၏ဒေသဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါရှုခင်း resolution ကို pixel နှုန်းတဦးတည်းမီတာဖြစ်ပါသည်, နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ .Compatible (mesh) 10m resolution ကိုမြင့်ဒေတာနှင့်အတူထည့်သွင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
downloads ရယူရန္ 19 904
လေဗနုန်တော Photoreal FSX & P3D HOT
တရားဝင်လက်ဘနွန်သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်လူသိများလေဗနုန်တောင်ပေါ်, အနောက်တိုင်းအာရှအတွက်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အနောက်ဘက်မြေထဲပင်လယ်ဖြတ်ပြီးစဉ်ကတောင်ဘက်မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးမှဆီးရီးယားနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ မြေထဲပင်လယ်ဝှမ်းနှင့်အာရေဗျအရိပ်အမြွက်၏လမ်းဆုံလမ်းခွမှာလေဗနုန်တော၏တည်နေရာ ... ဆက်ဖတ်ရန်
downloads ရယူရန္ 38 936
ဣသရလေ Photoreal FSX & P3D HOT
ဤတွင်ဣသရေလအမျိုး, ပါလက်စတိုင်း, ဂါဇာနှင့်ဂိုလန်ကုန်းမြင့်၏တစ်ခုလုံးကိုပိုင်နက်ကိုဖုံးသော FTXDes ကကမ်းလှမ်းဣသရေလအမျိုး၏လှပသောဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်ရှုခင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရှုခင်း၏ texture resolution ကို VFR ပျံသန်းမှုအတွက် "1m / pixel" စံပြဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးတည်းသာရာသီမပါညဥ့် texture နှင့်အတူရှိနေပါသည်။ တစ်ဦး LOD10 ကွက်ပါဝင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
FTXDes (photoreal ရှုခင်း), FreeMeshX 2.0 (mesh), Stas Harchuk (ဘင်ဂူရီယန် Intl)
အရွယ် 8.80 GB ကို
downloads ရယူရန္ 24 255
ဆန်ဖရန်စစ္စကို - Mega Photoreal ရှုခင်း FSX & P3D HOT
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကျော်ပျံသန်း VFR ၏အိပ်မက်မက်သလား? ဒါဟာယခု 1m ၏တစ်ကွက်နှင့်အတူ resolution ကို 10m / pixel ၌ဤထိပ်တန်းဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်ရှုခင်းကိုကျေးဇူးတင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရှုခင်းကယ်လီဖိုးနီးယား၏ကြီးမားသောဧရိယာအထိချဲ့ခြင်းနှင့် KSFO အပါအဝင်7လေဆိပ်ပါဝင်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အပြာရောင်က Sky ရှုခင်း (Gottfried Razek)
အရွယ် 2.52 GB ကို
downloads ရယူရန္ 58 418
Las Vegas မှ - Mega Photoreal ရှုခင်း FSX & P3D HOT
McCarran Intl (KLAS), Henderson (KHND), ရေကန် Mead,: Echo ဂလားပင်လယ်အော်, ကျောက်သားစီးတီး (21m နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ resolution ကို 750m / pixel အတွက် 1 10 စတုရန်းကီလိုမီတာအလွန်ကြီးမားဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်ရှုခင်း Las Vegas မှနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၏မြို့စုဆောင်း mesh KBVU), မြောက်အမေရိက Las Vegas မှ (KVGT), Nelly လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို (KLSV), မြောက်ပိုင်း Pahrump ချိုင့် ... ဆက်ဖတ်ရန်
အပြာရောင်က Sky ရှုခင်း + အမ် Reiffer
အရွယ် 5.05 GB ကို
downloads ရယူရန္ 43 189
channel ကျွန်းများ X ကို HD ကို FSX & P3D HOT
အဆိုပါ Channel ကိုကျွန်းများ၏အလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်အသေးစိတ်ရှုခင်း, သုံးလေဆိပ်လည်းပါဝင်သည်: Alderney (EGJA), ဂါဇီး (EGJB) နှင့်ဂျာစီ (EGJJ), Photo-အစစ်အမှန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, များစွာသောငြိမ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အသေးစိတ် Rex ပြီးတော့ Taxisigns HD ကိုအတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလင်းသက်ရောက်မှု, 3D ချဉ်းကပ်အလင်းအိမ်ဤရှုခင်းသုံးခုစလုံးကျွန်းကိုဖုံး ... ဆက်ဖတ်ရန်
အရွယ် 187 ကို MB
downloads ရယူရန္ 26 751
ကိုဆိုဗို Photoreal (LYPR) FSX & P3D HOT
ဤဓာတ်ပုံ-အစစ်အမှန်ရှုခင်းကိုဆိုဗို၏တစ်ခုလုံးကိုပိုင်နက်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောရာသီနှင့်အတူပါဝင်သည်။ မြေဆီလွှာကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ဆုံးဖြတ်ချက် 2m / pixel.Scenery အောက်မှာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် P3Dထို့အပြင် v3 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် FSXPristina လေဆိပ် (LYPR) .Kosovo မှပယ် .Take တစ်ဦးအငြင်းပွားနယ်မြေဖြစ်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း st အသိအမှတ်ပြု ... ဆက်ဖတ်ရန်
FTXDes - စီမံကိန်းပွင့်လင်းရှုခင်း
အရွယ် 2.64 GB ကို
downloads ရယူရန္ 17 529
ကိယက်ဗ် FSX & P3D HOT
Excellent ကဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်သုံးလေဆိပ် (Boryspil အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် UKBB, ကိယက်ဗ် Zhuliany အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် UKKK, စနစ်သည် UKKT) နဲ့ယူကရိန်းမှာကိယက်ဗ်၏မြို့သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ရှုခင်း (နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်) ကိုရှုခင်းက c ပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်, 250 ထူးခြားတဲ့အဆောက်အဦးများ, တစ်ထိပ်တန်း autogen ပါဝင်သည် .. ။ ဆက်ဖတ်ရန်
အရွယ် 1.20 GB ကို
downloads ရယူရန္ 25 771
Chios ကျွန်း LGHI Photoral FSX & P3D HOT
photo-ကိုမှန်ကန်ဂရိနိုင်ငံ Chios ကျွန်း၏ရှုခင်း, ကျွန်းသာ 8 ကီလိုမီတာတူရကီကမ်းရိုးတန်းမှဖြစ်ပါတယ်, သူ့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရှုခင်းသင်တို့ပြေး Simulator ကိုမှထိပျတနျးထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည်, ဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာ flights.The ရှုခင်းအဘို့အ Chios လေဆိပ်ကနေချွတ် "LGHI" ဓာတ်ပုံကိုလည်းပါဝင်သည် -... ဆက်ဖတ်ရန်
downloads ရယူရန္ 18 588